XAASAASI: Madaxwayne Farmaajo “Dowladu hal sano kaliya waxkasta kuma qaban karto wakhti ayaa loo baahanyahay”…(Akhriso) | Xogtashacabka24.com
XAASAASI: Madaxwayne Farmaajo “Dowladu hal sano kaliya waxkasta kuma qaban karto wakhti ayaa loo baahanyahay”…(Akhriso)
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo) ayaa markii ugu horaysay si caro leh kaga hadlay khilaafka ku soo noq noqday dowladda ee lagu carqaladaynayo waxqabadkeeda.
Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in is qabqabsiga uu yahay waxa Soomaaliya ka reebay dowladaha jaalkeeda ah, isagoona soo hadalqaaday in dowlad loo doorto mudada la doortay inay wax ku qabato balse uu dhaqanka Somalidu noqday in dowladdii la doortaba aanu waqtigeedu dhaafin hal sano.
“Is qabqabsiga khilaafka iyo dhibaatada inay tahay waxa dib noo dhigay ee naga reebay dowladaha caalamka.
Dowlad waala doortaa madaxna waala doortaa waqti ayayna leeyihiin oo waajibaadkooda ay ku gutaan, laakiin anagu dhaqankan leenahay waxay tahay in dowladdii timaadaba aysan dhaafin sanad.” Ayuu yidhi Madaxwaynaha Soomaaliya.
Madaxwaynaha ayaa yidhi “Dowlad waxaan ka wadaa xukuumadda oo lagu mashquuliyo ama lagu mashquulo lix bilood oo dowlad la saaro iyo lix bilood oo dowlad la rido, macnaheedu waxay tahay haddii mar khilaaf uu dowladda dhexdeeda ka yimaado inaanan waxba la qaban, inaan umadda loo adeegin.”
Madaxwayne (Farmaajo) ayaa xusay haddii aanay dowladdu horumar la imaanin inay ka faa’iidaysan karaan cadowga dalka iyo dadkuba oo uu kala jeedo Ururka Al -Shabaab.
“Waxqabadna hadduusan imaanin waxaa ka faa’iidaysanaya qolada cadowga nala ah oo aan ognahay inaanay waxba u aabo yeelaynin ee Shabaabka la yidhaahdo.” Ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo) Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliya.
Madaxwayne (Farmaajo) ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu sagootinayay oo xalay lagu qabtay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Si kastaba ha ahaatee hadal ayaa u muuqda mid uu madaxwayne Farmaajo shacabka soomaaliyeed ku dareensiinayo in aysan suurto gal ahayn in ilmuhu markuu dhasho isla markaasba uu socdo ama noqdo hana qaad waxtar leh balse uu u baahanyahay wakhti uu ku koro kuna hana qaado oo waxtar uu ku noqdo sidaasi si lamid ahna ay dowladiisu u baahantahay wakhgti ay ku hana qaado oo aan halsano waxkasta lagu qaban Karin dal 30 sano ku dhowaad bur-bursanaana aan lagu dhisi Karin.